Bamenze waphelelwa wukuzethemba uLira | News24
Bamenze waphelelwa wukuzethemba uLira
Durban - Intandokazi yomculi wakuleli uLira, ogama lakhe langempela nguLerato Molapo uthi ziningi izinkinga ahlangabezane nazo ngesikhathi engena kwezikaqedisizungu. Uthi lezi zinkinga zimenze waphelelwa wukuzethemba, wazibona engelutho.
Engxoxweni ekhethekile abe nayo neLANGA LangeSonto uthi ukuba yindoni yamanzi (ibala elimnyama), yizinwele zendalo ezingafakwe muthi, nomzimba omncane bekumenza abe yinhlekisa kwabanye abantu.
"Abantu bebeke bangibuze ukuthi kungani ngonde kanje, angidli ngani. Kungani ngimnyama ngale ndlela, angigcobi ngani izinto zokukhanyisa ibala. Ukuba nezinwele zesintu nakho bekwenza ngihlaselwe, bebuza ukuthi yini ngingawafaki ama-weave ngoba imali nginayo. Ngikhumbula ukuthi kuke kwaba nomkhankaso obhekiswe kimina abantu bengicabangela ukuthi yimaphi ama-weave engingawafaka angifanele. Abantu bangenze ngazizwa sengathi kukhona okungalungile ngami," kuchaza uLira.
Le ntokazi eyaziwa kakhulu ngezingoma okubalwa kuzo ethi Hamba, Ngiyazifela, Something Inside So Strong nezinye iseke yahlabana ngenqwaba yezindondo kumaSouth African Music Awards.
Elandisa leli phephandaba uthi ugcine efike esikhathini la ebona khona ukuthi kumele enze into ezothokozisa yena, anganaki kakhulu ukuthi abantu bathini ngaye.
"Ngikulwele kakhulu ukuthi ngibe yimina. Yonke into engiyiyo iwubumina nokuyinto engijabulisayo. Kangizami ukuba ngomunye umuntu ngenhloso yokujabulisa abantu," kusho yena.
Uthi into emsize ukuba akwazi ukuzamukele indlela ayiyo kube wukubheka izinto azithandayo kuye kuqala.
"Ngathi uma ngibhekene nesibuko ngqo ngabona ukuthi amehlo ami ayangichaza, makhulu, nezindebe zami ngokunjalo. Kangangokuba bekuke kube khona isikhathi la bengingayigcobi i-lipstick ezindebeni ngoba bengichazwa wubunjalo bazo. Ngingasho nje ngithi ukuzamukela ubunjalo bami kungithathe isikhathi eside kodwa kungisizile ukubheka izinto engizithandayo ngami," kuchaza uLira.
Uthi kubalulekile ukuthi uma ungowesifazane uzibungaze, ungalindeli ukubungazwa ngabanye abantu.
"Kwesinye isikhathi sizimatanisa kakhulu nobudlelwano esikubo noma mhlawumbe nebandla esikhonza kulo ugcine ungasazazi ukuthi ungubani. Kumele sizazi ukuthi singaphezu kwalokho, kuningi esingaba yikho," esho.
Ngakwezomculo uthi okwamanje usematasa nokuphusha i-album ayikhiphe ngonyaka owedlule ethi Born Free okuphinde kutshengiswe ukwenziwa kwayo ohlelweni lwakhe iDreamchaser oludlala kwi-Fox Life, ku-channel 126 kwi-DStv.